बुधबार, ०५ कार्तिक २०७७, ०८ : ००
अभिनेता अनमोल केसीसँग ‘जेरी’ खेलेर चर्चा चुल्याएकी अभिनेत्री आना शर्मा यतिबेला फिल्मबाट टाढा छिन्। उनी हातमा फिल्म फालाफाल हुँदाहुँदै टाढिएकी भने होइनन्।
सर्‍याे दुई ठूला फिल्मको रिलिज: सरकारकै कारण डराए निर्माता
फागुन ३० गते प्रदर्शन मिति तोकेर पोस्टर गीत र टिजर सार्वजनिक गरेका दुई नेपाली फिल्मले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण देखाउँदै फिल्म प्रदर्शन मिति अनिश्चित कालका लागि सारेका छन्।
नेपाल आइडल: पवनकलीको ठट्टा
नेपाल आइडल फाइनलको नजिक आइपुगेको छ। यस पटक माम्पीले पवनकलीको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आएकी थिइन्। एक समय उनी पवनकलीको रुपमा दर्शकमाझ लोकप्रिय बनेकी थिइन्।
गएको शनिबारदेखि नेपाल टेलिभिजनमा नयाँ रियालिटी सो ‘नेपाल स्टार’ शुरु भएको छ। पहिलो एपिसोडमा पोखरा अडिसन देखाइएको छ। रामकृष्ण ढकाल, अञ्जु पन्त र संगीकार आलोकश्री यस सोको निर्णायक रहेका छन्।
आफ्नो र अरुको बिहेको फरक !
वर्षा राउत र संजोग कोइरालाले प्रेम दिवसको अवसर पारेर एक वर्षअघि बिहे गरेका थिए।
गरिमाको बेमौसमी बाजा
झोला नायिका गरिमा पन्त अहिले फिल्म उद्योगबाट टाढा छिन्। पहिले फिल्ममा काम गरुञ्जेल सोझी नायिकाको छवि बनाउन सफल उनी अहिले त्यसैलाई तोड्न मरिमेटेर लागेकी छन्।
‘लालपुर्जा’, ‘रोज’, ‘साइनो’ जस्ता फिल्ममा अभिनय गरे पनि दर्शकबाट पत्याइन खोजिरहेकी अभिनेत्री हुन्, मिरुना मगर।
प्रेममै छन् त नीता र हरिहर ?
अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना र ज्योतीष कम अभिनेता हरिहर अधिकारीको प्रेम सम्बन्धको चर्चा चुलिन थालेको छ।
वर्षाको खुसी लुक्स
अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी जति खुसी कुनै अभिनेत्री कोही छैन होला ! यो हामीले भनेको होइन, उनको इन्स्टाग्रामले भनेको हो। हालै उनले फरक–फरक लुक्सका तस्बिर पोस्टेकी छन्।
पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका अभिनेत्रीहरुले भटाभट घरजम गर्न थालेपछि अब बाँकी अभिनेत्री कसको घरजम बाँकी होला भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै चुलिएको छ।
अदितीको कमब्याक कि हल्ला
इन्स्टाग्राम क्विन फिल्म ‘कृ’ को अभिनेत्री अदिति बुढाथोकीको फेरि चर्चा हुन थालेको छ। बलिउड प्रवेशका लागि संघर्ष गरिरहेकी अदिति फेरि नेपाली फिल्ममा फर्किन लागेकी छन्।
युट्युवबाट आम्दानी राम्रै हुन थालेपछि पछिल्लो समय बोल्न सक्ने, कन्टेन्टको खोजी र डिजाइन गर्न सक्ने हजाराैं युवायुवती च्यानल खोलेर युट्युवमा भिडियो हाल्न थालेका छन्। युट्युवमा भिडियो हाल्नेमा कलाकार, पूर्व मिस नेपाल, पत्रकारदेखि सामान्य युवायुवती पनि उत्तिकै छन्।
गहिरो विषय, सतही प्रस्तुति
पछिल्लो समय विश्वमा मानसिक समस्या बढ्दै गइरहेको छ। कतिसम्मभने एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमै पनि प्रत्येक चारमध्ये तीन जना मानसिक रोगका शिकार छन्। समस्यासँगै यससम्बन्धी सचेतना पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसै बेला मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर निर्देशक कृष्ण खड्काले नाटक ‘सब ठीक छ’ तयार गरेका छन्।
कमेडी च्याम्पियन: ग्रान्ड फिनालेमा भिडन्त
ग्रान्ड फिनाले होटल सोल्टी होटलमा गरिने ‘कमेडी च्याम्पियन’का निर्देशक विशाल भण्डारीले बताए।
नेपाल आइडल: पुराना र नयाँ आइडलको संयुक्त भिडन्त
सिजन ३ ले सिजन वनको जस्तो दर्शकको मनमा डेरा जमाउन नसकिरहेको बेला आयोजकले चलाखी गरे। पुराना प्रतिस्पर्धीहरुलाई नयाँसँग भिडाएर आइडलको माहोल तताउन खोज्यो।
नेपाल आइडल: ‘बाहिरिए पनि खुसी छु’
मैले यति धेरै अपेक्षा गरेको थिइनँ तर टप आठमा पुग्नु नै मेरो ठूलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। मभन्दा धेरै ट्यालेन्ट दाइदिदीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुसँग बसेर गाउँदा र प्रतिस्पर्धा गर्दै टप टेनभित्र पर्नु मेरो ठूलो उपलब्धि ठानेकी छु।
२७ सय अडियसन्सलाई जितेर फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ मा हिरोइन भएकी कृष्टिना गुरुङ यतिबेला उत्साह र डर दुवै भावना एकसाथ अनुभूत गरिरहेकी छन्।
प्रायः राम्रा फिल्म छान्ने चासोमा फ्लप हिरोइनको छवि बनाएकी सुरक्षा पन्तले चरित्रअनुसार आफ्नो सौन्दर्यलाई बलिदान दिइन्।
हेर्न लायक ब्याचलर च्यालेन्ज
जोडी होस् त प्रियंका र आयुष्मान अर्थात् आयंकाजस्तो। जे काम गर्छन्, त्यो गसिपको मसला बनिहाल्छ। पछिल्लो समय नै हेर्नुस् न, प्रियंकाले थाइल्यान्ड गएर ब्याचलर पार्टी मनाइन्, गसिप बनिहाल्यो।
नम्रताको साल्सा मोह
फिल्मका कलाकारहरु धमाधम सिङ्गलबाट मिङ्गल बनिरहेका छन्। केही बिहेको योजना बुनिरहेका छन्, कसैको मिति तोकिइसक्यो त केही प्रेमी चिनाउनेतिर लागेका छन्।